” အညွန့်တလူလူ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” အညွန့်တလူလူ”
Posted by TTNU on Aug 21, 2012 in Creative Writing, Think Different | 36 comments
ဘယ်သူမှ “ငတိ” လို့ မပေးချင်ဘူးနော။
ဘုရားပန်းကပ်ရင်လည်း အညွန့်လှလှလေးပါတဲ့ ပန်းမှ ကပ်ချင်တယ်။
ဥပမာ (၁) သပြေညွန့်
ခြွေပစ်တော့တာပါပဲ။ တို့စရာဘာတို့စားသလဲမေးရင် ဗူးရွက်ပြုတ်လို့ မဖြေပေါင်၊ ဗူးညွန့်လေးပြုတ်တို့တာ
လို့ပြောကြတာ။ ဒီလိုပဲ ဖရုံညွန့်၊ ဖရဲညွန့် စသဖြင့်တို့လည်းအညွန့်လေးတွေကြော်စားမှ ချိုသလိုလို။
(Credit to My Balcony Jungle.)
တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ညွန့်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို မကြိုက်ချင်ပြန်ပါဘူး။ဒီကောင်က
သူများပစ္စည်းကို ဝိုက်ချင်၊ အချောင်ရချင်သူကို၊ စီးပိုးသူကို ကျွန်မတို့တွေ အမည်ဝှက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
လို့ခေါ်တတ်လေ့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ( အခုဒီအကျင့်မရှိတော့ပါ။ ကျောင်းတုန်းကပါ။)
ဝှက်စားကြတယ်လေ။ သွားတိုက်ဆေး မဝယ်ဘဲနဲ့ သူများသွားတိုက်ဆေးဘူးတွေက
လိုက်ညှစ်တတ်တာမျိုးတွေပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီ အမည်ပေးစံနစ်ပေါ်လာခဲ့ရတာပါ။
တကယ်တော့ နာမည်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေ။( ညွန့် ) ပါတဲ့ လူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ရေးမိ
နေပြီထင်ပါရဲ့။ ခွင့်လွှတ်တော့နော်။ ဟင်းရွက် အညွန့်ပုံလေးတွေ ကြိုက်လို့ ရေးချင်စိတ်ပေါက်ပြီး
ရေးချလိုက်မိတာပါ။ ထူးဆန်းတာကတော့ တွေ့ဖူးသမျှ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေ
အားလုံးထဲမှာ (ညွန့်) ပါတဲ့သူတွေ အားလုံး ကျွန်မကို ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြတာပါပဲ။
has written 88 post in this Website..
View all posts by TTNU →
တီချယ်ရေ အိမ်မှာ အမေကတော့ သဘောင်္ရွက်အညွှန့် အစိမ်းလေးတွေကို ရေနွေးဖျောပြီး ထမင်းနဲ့ မြှုပ်စားနေတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုပြီး။
အိမ်ပြောင်းဖြစ်ရင်တော့ အပင်တွေ စိုက်နိုင်သမျှ စိုက်မယ် အားခဲထားတယ်။ သစ်ခွစင်လှလှလေးလည်း အိမ်မက်မက်ထားတယ်။
ဒါနဲ့ အပေါ်ဆုံးပုံက သပြေပင်လေး စိုက်ချင်လား တီချယ် ။ အနော်လာရင် ယူခဲ့ပေးမယ် အပင်ပေါက် ။ အရမ်းလှတယ်။
Facebook မှာ အိမ်နားဓာတ်ဆီဆိုင်မဖွင့်ရေး သူများရေးတင်ထားပေးတာ
share ပေးဦးနော် မပုလေး။
အခု ဒီပို့(စ်)ကို ဖတ်တဲ့အချိန်
ညွန်ဆိုလို့မဆီမဆိုင်ဦးခင်ညွန့် ကို သတိယသွားလို့ 
သူလဲ သူ့ လက်မှတ်ကို ညွန့် နေအောင်ထိုးသဗျ
နောက်ဆုံး င သတ်လေးက ဗူးညွန့် လိုအပေါ်ကိုထောင်တက်သွားသေး
တီချာ့ အချစ်ဆုံး နှစ်ယောက်
ဒီလိုကွဲ့။ တီချာက Post တင်လိုက်ပြီး Preview ကြည့်တော့ ပုံတွေနဲ့စာတွေလွဲနေလို့
ပြန်စီရွာလည်၊ ကြီးဒေါ်မျက်စေ့တွေလည်၊ နေရာက ရပြီထင်ပါရဲ့လို့ ရွာထဲအဝင်
ရှင်တို့ မောင်နှစ်မ လာကြိုပေးနေတာ၊ ပျော်လိုက်တာ။
Pooch ရေ.. ရွှေကျီးမြင်တရားစခန်း ၂၃ရက်နေ့ထိ နံက်၆မှ၁၀ထိ လာမလား။
စံပယ်ချစ်သူ မောင်ကမ်းရေ.. တီချာ Time Line မှာသနပ်ခါးပန်းတွေပွင့်နေပြီ။
တီချယ်ရေ ပေါက်ပွင့်ကို မျှော်နေတဲ့ ခွေးလိုပဲ ဆင်ခြင်ပေးတယ်လို့ပဲ ဆိုချင်ဆိုပါတော့ ။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ အမေ့ကိုရော ဦးကြီးကိုရော အလွန်အင်မတန် ဖားနေရပြီး အလုပ်တွေ ကျုံးပြီး လုပ်နေပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သွားချင်နေတဲ့ ခရီးတခုကို ညီမတတွေ ကို ပါမစ်ပေးတဲ့အပြင် လိုက်လိုက်လျောလျောနဲ့ကို သဘောကောင်းပေးထားတာမို့ ကိုယ်ကလည်း ပြန်သိတတ်နေရပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီတခါလည်း မလာနိုင်သေးပါဘူး တီချယ်ရယ် ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတော့
ဒါဆို အနော် အလုပ်ပြီးရင်
နယ်က အိမ်မှာ သနပ်ခါးရောစံပါယ်ရော ပန်းပင်မျိုးစုံကို
အိမ်ရှင်ကောင်းဖြစ်အောင် စုပေါင်း အဲ့ခံပေးခဲ့ဖူးတာ ၁၀၀% မလွဲအေကန်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း
aww လွန်ခဲ့ပြီ… ဝေးသွားမှပြန်တွေးကာ (credit to ကိုငှက်)
အညွန့်လေးတွေကြည့်ပြီး ပြုတ်တို့စားချင်စိတ်လေးတွေပေါ်လာပါတယ် တီချယ်ကြီး ! ပုံထဲက သပြေပင် ပုံစံမျိုး ခပ်ကြီးကြီး( ၇ – ၈ ) ပင်လောက် အရင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရုံးမှာရှိလေတော့ ခူးပြီး ကျွန်တော် မနက်တိုင်း လိုလို ရုံးခန်းထဲ က ဘုရားစင် မှာ ဘုရားပန်းတင်ခဲ့တာကို သတိရသွားပါတယ် ။
လူအညွန့် ထက် အရွက်အညွန့် တွေ ကို ပိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
အများသူငါလိုဘဲ ပြုတ်တို့စားချင်တယ်။သုတ်စားချင်တယ်။ ဟင်းချိုခတ် သောက်ချင်တယ်။ :-)
စစ်တပ်၊ ရဲ၊ လက်ဝဲယိမ်း ပါတီအဖွဲ့တွေမှာတော့ လူငယ်တွေကို ရဲညွန့်လို့ခေါ်တယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးကလည်း ရဲညွန့်ဆိုပြီး ဆယ်ကျော်သက်တွေကို သင်တန်းပေးတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။
ရွာထဲက တရုတ်သူပုန် ကြေးမုံဂျီး ဓားပြတိုက်တုန်းက သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ရင် မအေးညွန့် မကြည်ညွှန့်လို့ အသံမြည်ဆိုဗဲ..။
အပေါ်ဆုံးက သပြေညွန့်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ပုံတွေကြည့်ပြီး ပြုတ်တို့စားချင်တယ်။ [:)]
တီချယ်ကြီးခဗျာင်္း…….ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင် ငယ်ငယ်က ကလေးဘ၀ စစ်တိုက်တမ်းကစားကြတာကို သွားသတိရတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် ပါးစပ်သေနတ်ပစ်ကြတဲ့အခါ …ဒိုင်း…ဒိုင်း…ဒိုင်း…အော်ရမဲ့အစား…ဗူးညွှန့်၊ ဖရုံညွှန့်၊ မအေးညွှန့်….လုိ့ အော်ပြီး ဆော့ခဲ့ကြတယ်။
ဒုတိယမြောက် လက်မလေးထောင် အားပေးသွားပါတယ် တီချယ်ရေ
ညွှန့်ရဲ့ ထပ်အညွှန့်က ဗုဒ္ဓဟူးနာမ်…
ညွှန့်နဲ့ ဓါတ်တူပနံသင့်သော တီချယ်ကြီးခင်ည…
ဟုတ်တာပေါ့တီချယ်ကြီးရေ … ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းဆိုလျှင် … အညွှန့် ဆိုတာလေးကိုမှ ကောင်းပေ့ထူးပေ့လို့ ထင်ပြီး …. ပိုနှစ်သက်ကြတယ် …. ။ ဘုရားပန်းတင်လျှင်လည်း အညွှန့်လေး တလူလူနဲ့မှ သဘောကိုကျလို့ …… ။ လူနာမည်မှာကျတော့ အဓိပ္ပါတယ် တမျိုး သက်ရောက်သွားပြန်တယ်ဆိုတာတော့ .. အခုမှပဲ သိပါတယ် … ။
လူတွေကလည်း ခက်သားလားနော် …ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်း သက်မဲ့တွေရဲ့ အညွှန့်ကိုသာ ဂရုစိုက်ကြတာ.. ကိုယ့်သားသမီး အရွယ်ကောင်း အဖူး အညွှန့်လေးတွေကိုတော့ ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေတယ် …… ။ ကျီးထိုးထိုး ၊ ခွေးစားစားဆိုပြီး ….. လမ်းမပေါ်နဲ့ပါ့ဘလစ်နေရာတွေမှာ ပစ္စလတ်ခတ် နေထိုင်နေတာ … မမြင်ချင်မှ အဆုံး မျက်နှာလွှဲနေကြတယ်ထင်ပါရဲ့ …… ။ (ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး … လူညွှန့်လေးတွေအကြောင်း ဆက်စပ်တွေးမိသွားလို့ပါ … )
တီတီနုဖော်ပြထားတဲ့ အညွှန့်လေးတွေကို ငါးပိရည်နဲ့တို့စားချင်ပေမယ့်
ငါးပိရည်နဲ့ လမ်းခွဲပီး အသည်းကွဲနေလို့ မစားးးတော့ပါဘူးးဗျာ…။
“အညွှန့်ခူးစားတာ´´ လို့ စကားအနေနဲ့သုံးတာလေးရှိတယ် ။
ပြီးတော့“ နှမ်းဖြူးတာ´´ လို့လည်း သုံးကြပြန်တယ်။ အဲဒါနှစ်ခုလုံး အကြုံးဝင်တဲ့ စကားအသုံးနှုန်းက
“ လူပေါ် လူဇော် လုပ်တာ ´´ တဲ့။ ခင်ခရဲ့ အတွေးပါးပါးပါ။ မှားမလားတော့မသိဘူး တီချယ်ရေ။
အရွက်ညွန့်ကျသဘောကျပြီး လူညွန့်တာသဘောမကျပေမဲ့ အရွက်ညွန့်သလို အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့ လူတော်လူကောင်းလေးများကိုတော့ တိုးတက်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။
မပုရေ.. ငါတစ်ထပ်ထဲကွမ်းတာပါဟဲ့။ ရှက်စရာ။ ဟီး။
မအေးကေရေ.. တစ်ချို့အညွန့်တွေက မကောင်းဘူးတော့။
(ညွန်ဆိုလို့မဆီမဆိုင်ဦးခင်ညွန့် ကို သတိယသွားလို့ )
လုပ်နေကြရင်တော့ အိမ်ရှင်လည်း ကျွတ်မှာပဲထင်တယ်နော်။
ရဲညွန်နဲ့ မအေးညွန့်က မောင်နှစ်မ မဟုတ်လား။ ဟီးဟီး။
တီချာလည်းတို့စရာသိပ်မက်တာ။ ဖောင်ကြီးတက်တုန်းက တောစခန်း
ထွက်ရင် စားကောင်းတဲ့ အပင်မှန်သမျှခူးကြတာ သတိရမိသေးတယ်။
တီချယ်နုရေ ရွှေကြည်ကလေအညွှန့်ဆိုတာနဲ့ပြုတ်စားချင်တာ၊ ဟင်းချိုဆိုလည်းကြိုက်မှကြိုက်။
စစ်တိုက်တန်းဆော့ခဲ့တုန်း ဗူးညွန့်၊ ဖရုံညွန့်၊ မအေးညွန့်လို့
အော်ခဲ့တာလား။တီချာတို့က “ထီးညွန့် ထီးညွန့်” လို့အော်တာဗျ။
Thumb up လေးအတွက် ကျေးဇူးနော်။
(ကိုယ့်သားသမီး အရွယ်ကောင်း အဖူး အညွှန့်လေးတွေကိုတော့ ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေတယ်)
ဒီမိဘတွေက ကိုယ်တိုင်လည်း အနာဂတ်မရှိသူတွေနေမှာပါကွယ်။
တီချာ့အိမ်မှာ ရဲယိုသီးတွေသီးနေပြီ။ ဟိုတစ်နေ့က ပျားရည်နဲ့စားရတယ်
ဆိုလို့ စားကြည့်တာ … ဖွီး… နံလိုက်တာ.. အံမာလေးတော်။
အရွက်စားကြည့်တော ခါးပြန်ရော။ ဒါပေမဲ့ ကိုရင့် အကြံပေးချက်ကို အထူးလေးစားစွာ
ဖြင့် အရွက် ထပ်စားကြည့်မယ်နော်။
ဧကန္တသွေးတိုးရှိလို့လား။
တီချာလည်း ငါးပိရည်မတည့် အဖွဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးချက်နဲ့ တို့စားလေ။
ဟုတ်ပါ့နော်။ ဘယ်အချက်ကိုမှ ပရိတ်သတ်က လက်မခံဘူး။
ညွန့်တတ်သူ၊ နှမ်းဖြူးတတ်သူ၊ လူပေါ်လူဇော်လုပ်သူ၊ ဆရာကြီးလုပ်သူ၊
နငယ်အမြီးလာတတ်သူ၊ ဘုန်းကြီးရှေ့ကသွားပစေဟေ့ လို့ ဝင်လျှာရှည်တတ်သူ၊
တိမ်ညွန်ကိုတက်စားတဲ့ နဂါးဆိုတာ ငယ်ငယ်တုန်းက
တီချယ်ကြီး အညွှန့်ကြောင်းပြောတော့ ..
အနော့်ရဲ့ နာမည်အရင်းကို ပြေးပြီး အမှတ်ရလိုက်မိတယ်ဂျ ..
“စိန်ပလိန် တိန်ဗြောင် မောင်မောင်ညွန့်” တဲ့ ခည .. အဟီးးးး
နောက်ထာပါ ခင်ဗျာ ..
တစ်ချိန်ကတော့ ညွန့် ၂ ညွန့်ဟာ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ (ကျမတို့ me three လို့ ပြောင်စရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥိးမျိုးညွန့်ပါ၊သူရာထူးရှိတုံးကတော့ သူ့ကို မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူအနားယူပြီးမှ ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ မှတ်စုလေးတွေ သူစုဆောင်းထားတာ ထွက်လာတော့ သူ့ကို အမှတ်ပေးမိပါတယ်။
သူနဲ့ပြောင်းပြန်ကတော့ ဦးခင်ညွန့်ကိုပါ။ ရာထူးရှိစဉ်က သူ့ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို ကြည့်ပြီး ထက်မြက်တယ်လို့ မနှစ်သက်လှသော်လည်း ချီးကျူးမိ၊အထဲရောက်တော့ သနားမိ၊ဒါပေမယ့် ထွက်လာတော့ မာယာတွေပါတယ်ထင်လို့ မကြိုက်တော့ပါဘူး)ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ပါ။
အညွန့်ဆိုလို့ အညွန့်ကျိုးတယ်။အညွန့်ချိုးခံရတယ်ဆိုတာ နည်းနည်းများလွဲနေသလားလို့။
အပင်တွေ စိုက်လာမိတော့ တစ်ချို့အပင်က အညွန့်ကျိုးရင် သေတယ်၊တစ်ချို့အပင်တွေက ခေါင်ညွန့်လေးချိုးပေးမှ အခက်အလက်ဝေဖြာတာရှိတယ်၊ ပင်စည်အားနဲ့ အကိုင်းအားမျှတပြီး လေဒဏ်မိုးဒဏ်ခံနိုင်တာရှိတယ် ဆိုတော့ ပင်ကိုယ်ဓာတ်ခံ ပေါ်မှာပဲ တည်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်ရှင့်။
“တစ်ချို့အပင်တွေက ခေါင်ညွန့်လေးချိုးပေးမှ အခက်အလက်ဝေဖြာတာရှိတယ်၊ ”
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဇတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့စဉ်းစားနေတာကြာပြီ၊ မရေးဖြစ်သေးဘူး အန်တီရေ
“စိန်ပလိန် တိန်ဗြောင် မောင်မောင်ညွန့်” ရေ…
ပြီးတော့ အညွန့်ကျိုးတယ်ဆိုရင် ဘဝမှာ ရှေ့ဆက်တက်ဖို့ လမ်းပျောက်သလို
ဖြစ်ကြရပြီး၊ အညွန့်ချိုးခံရတာကတော့ Passive Voice လို့ မြင်ပါတယ်။
( ခေါင်ညွန့်လေးချိုးပေးမှ အခက်အလက်ဝေဖြာတာရှိတယ်၊ ပင်စည်အားနဲ့ အကိုင်းအားမျှတပြီး လေဒဏ်မိုးဒဏ်ခံနိုင်တာရှိတယ်)
ဒီအိုင်ဒီယာလေးကြိုက်တယ်။ ချိုးပေးသူ ပန်းပျိုးသူရဲ့စေတနာနဲ့ ပညာကြောင့်လို့
အော်အခုရက် သီချင်းတွေဓါတ်ပုံတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတော့ အတော်လေးကိုနောက်ကျသွားပါလား။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကသူများစာကို မန်းတဲ့နေရာမှာ နောက်ကျနေကျလူဆိုတော့သိပ်တော့မထူးဆန်းဘူးထင်ပါ။
ကျနော်လို ပျိုတာတွေကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ လူအိုလူဟောင်းများကတော့
ဲအဲတော့ အခုအရွယ်အပိုင်းမှာ ဘေးဖယ်နေတာများပါတယ်မာမီရေ။
ဒါကတော့ ကိုယ့်အတွေးဆိုတော့ သူများနဲ့တူချင်မယ် ပေါ့နော်။
ကိုပေါက်ရေ.. နောက်ကျပေမဲ့ အရွက်တွေဝေနေတဲ့
စိမ်းစိမ်းစိုစို တောရိပ်ညိုပါဟဲ့။ အလို … အညွန့်တွေကလည်း
တီချာရဲ့စာနဲ့ Comment တွေဖတ်ပြီး
အညွန့် နဲ့ပတ်သက်လို့ စကားညွှန်း
nandar aung says:
တီချယ်ရေ မနေ့ကတော့ ထမင်းဆိုင်မှာ ဘူးညွန့်နဲ့ငပိရည်နဲ့စားခဲ့ပါတယ်..
နှစ်ညွန့်ပေါင်းလို့မှကျပ်မပြည့်ဆိုတဲ့ ကိုဇာဂနာကြီးစကားလေး ကြားယောင်မိပါသေး။
တားတားကိုလည်း.. အလင်းညွှန့်လို့ ခေါ်မှာလား..ခည ။
တီချာတို့ မှော်ဇာမှာနေတုန်းက အိမ်နောက်ဖေးလယ်ကွင်းထဲမှာ စပါးတွေရိတ်ပြီးချိန်
ရိုးပြတ်ထုံးတွေပုံထားချိန် ကန်သင်းရိုးတစ်လျှောက်မှာ ကောက်ရိုးနွယ်တို့၊ လယ်ကန်စွန်းညွန့်တို့
လိုက်ခူးခဲ့ကြတာခုထိမြင်ယောင်နေမိတယ်။ အနွယ်လေးတွေ အညွန့်လေးတွေခူးပြီးညနေခင်း
နေညိုချိန် အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ငါးပိရည်နဲ့ မြုပ်တို့ရတဲ့ အရသာ မေ့ရက်စရာမရှိပါကွယ်။
အညွန့်တလူလူတက်စေချင်လို့ အလင်းလူလို့ ခေါ်မယ်လေ။
အလင်းလူ…တဲ့ ။ နာမည်လေး.က ချစ်စရာလေး..